Yan Naing on Sat Nov 27, 2010 10:24 am
( 1 ) New members must be post their first ever post in Instroduction Section to introduce.
Member အသစ်များနေဖြင့် Instroduction Section တွင် ပထမဦးစွာ မိမိကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
(2) Members must be polite on each other n should be help each other in every sections.
Member များနေဖြင့် အချင်းချင်းလေးစားစွာ ဆက်ဆံကြရန် နှင့် အပြန်အလှန် အကူညီပေးကြရန်။
(3) Truly prohibit arguing , fighting , threading each other on the forum.
Member များအချင်းချင်း အငြင်းပွားခြင်း ၊ ရန်ဖြစ်ခြင်း ၊ တိုက်ခိုက် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခြင်း များကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားပါသည်။
(4) Not Allow Spam posts here . Moderators and Site Helpers will take action on that posts .
Spam ပို့စ်များအား ခွင့်မပြုပါ ။ ၄င်းပို့စ် များအား Moderators နှင့် Site Helpers များမှ ထိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
(5) N-STAR SAT Forum is stand alone with itself and no intention to interrupt any people or any business . This forum is publish by the owner of N-STAR n only intend to collect his friends altogether in one place for their hobbies.Site builder intend to help who really want to learn about electronics & satellite . So , if any other problem occour outside of this forum will not be depend on N-STAR , it's depend on the victims only.
N-STAR SAT Forum သည် N-STAR ပိုင်ရှင်မှ တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သီးခြားရပ်တည်သော ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ် သည့်အတွက် အခြား မည်သည့် ပုံစံတူ ဖိုရမ် (သို့) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး (သို့) စီပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုခုကို တိုက်ခိုက်ခြင်း ၊ ထိခိုက်ခြင်းလုံးဝ မရှိပါ။ ဖိုရမ် တည်ထောင်သူဧ။် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၄င်းဧ။် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအတွက် ၄င်းတို့ ၀ါသနာပါသော အီလက်ထရောနစ် နှင့် စလောင်း ပညာရပ်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုစုစီးစီး နှင့် လေ့လာစူးစမ်းနိုင်ရန် ၊ အကူအညီပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်ပတွင် N-STAR SAT Forum နှင့် ပတ်သက်ပြီး member အချင်းချင်းကြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော မည့်သည့် ပြသနာ မျိူးကိုမျှ N-STAR SAT Forum (သို့) တည်ထောင်သူမှ လုံးဝ ( လုံးဝ ) တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း နှင့် N-STAR SAT Forum နှင့် လုံးဝ ( လုံးဝ ) သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိုပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Thx. For Reading This.